Abenzi baseChina abathengisa ngokuthe ngqo kwiZakhiwo zangaphandle zeAluminiyam yeProfayili yabenzi kunye nabathengisi | IHUIYUAN
I-Bar ye-Bar yesisindo sokuBala
Umenzi, abaXhasi boBume boBume boBume boBume boBume boBucala boBucala boBucala beNsimbi
Umenzi, Ababoneleli ngeeNtsimbi ezijikelezayo zentsimbi
Imodeli ebandayo eshushu eqengqelekileyo 301 309s 410s 9mm 2507 304 316 ...
Ishubhu yentsimbi eshushu eshushu
Iphepha eliCociweyo eliCociweyo leAluminiyam
Aluminium Profile for Kitchen iKhabhinethi / ucango / window M ...
Factory Direct Ukuthengisa yangaphandle Building Aluminium Pro ...
Umzi mveliso ngokuthe ngqo ukuThengisa iProfayili yeZakhiwo zeAluminiyam
Ingxubevange yeAluminiyam 6061, 6063
Ubushushu T5, T6
Unyango oluphezulu Mill entanjeni, Sandblasting, Anodizing, Electrophoresis, ipolishi, Power ukutyabeka, PVDF ukutyabeka, Wood transfer, njl
Immimiselo yokuhlawula I-30% yedipozithi, i-70% eseleyo ngaphambi kokuhambisa ngeT / T; L / C kwimbono
Iphepha lealuminium elinombala libonakala lihle kunye nokumelana nokuhlala ixesha elide. Amandla ayo kulula ukuyifaka, kwaye ukumelana nomlilo kunye nokugcinwa kobushushu kulungile kakhulu. Ukongeza, iphepha le-aluminium elinombala elinombala linokuphinda kwenzeke kwakhona ngenxa yokuqwalaselwa kwezinto zayo, ezinokuthi zinoqoqosho kakhulu.
Umphezulu wepleyiti e-aluminium enombala akufuneki ubene-induction ebonakalayo, ukutyabeka okushiyekileyo, okanye ukonakaliswa kokungena kwengubo, kunye neempuku, ukukrwela, kunye namadyungudyungu awavumelekile. Zonke ezi zinto kulula ukuzibona. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kufuneka ujonge ngononophelo kumahluko wombala kwiphepha le-aluminium enombala. Ukuba awuyinikeli ngqalelo, akukho lula ukuyibona, kodwa iya kuchaphazela isiphumo sokuhombisa ngexesha lokufaka.
Isiphumo sokusasaza ubushushu se-radiator ye-aluminium ye-LED inolwalamano ngqo nobomi benkonzo yezibane ze-LED.
Njengesizukulwane esitsha semithombo yokukhanya eqinileyo, ukukhanya kwe-diode yokukhanyisa ukukhanya kwe-LED kunezibonelelo ezininzi ezinjengobomi obude, ukusebenza kakuhle, ukugcina amandla kunye nokukhuselwa kwendalo. Zisetyenziswa ngokubanzi kwimimandla yokubonisa kunye nezibane. Ngophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, ubuchwepheshe obuphambili busetyenziswa ngokuqhubekekayo Ukusebenza okuqaqambileyo kuyaqhubeka ukuphucula, kwaye iindleko ziyaqhubeka ukwehla.
Nangona izibane ze-LED zinezibonelelo ezininzi, izibane ze-LED ezikhoyo ziguqula kuphela i-20-30% yamandla ombane abe ngumbane wokukhanya, kwaye i-70-80% eseleyo iguqulwe ibe ngamandla obushushu, kunye namandla obushushu aveliswe yi-LED Ubomi bobomi kunye nokusebenza okuqaqambileyo Unempembelelo enkulu.
Kukholelwa ngokubanzi ukuba ubushushu bezibane ze-LED akufuneki zigqithe kuma-80 degrees. I-60-70 yindawo efanelekileyo yokusetyenziswa, kodwa kunzima ukuyenza kwindawo yokwenyani. Makhe sijonge ekusetyenzisweni kwezibane zasesitalatweni ezisebenzisa imithombo yokukhanya kwe-LED kwizicelo ezisebenzayo:
Uvavanyo lweenyanga ezintathu lwenziwa kwisixeko sasekhaya, kwaye iziphumo zafumanisa ukuba ukucinywa kwezibane ze-LED ezivavanyiweyo ngexesha lokusetyenziswa kwaba: i-8.77%, i-15.5% kunye ne-20.4%. Isizathu sokuba kubekho ukucuthwa okukhulu kungenxa yokuba iqondo lobushushu lokusebenza kwezi zibane zitalatweni zidlula iidigri ezingama-80, nto leyo ethetha ukuba kukho ingxaki yokusasazeka kobushushu.
Egqithileyo Iphrofayili ephezulu yealuminium ekhokelwa yimigca yokukhanya kweLed
Okulandelayo: IProfayili yoMnyango kunye neFestile yeAluminiyam
Ukwakha iProfayili yeAluminiyam
Aluminium Profile for Kitchen iKhabhinethi / ucango / win ...
Umenzi weAluminiyam we-Aluminium extrusion
I-Aluminium extrusion ekhokele iAluminiyam yeProfayili yeLed ...
IProfayili yoMnyango kunye neFestile yeAluminiyam
Umbala oCwangcisiweyo we-Aluminium Coil
Ukwakha iProfayili yeAluminiyam, Iphepha leAluminiyam, Isinyithi seAluminiyam-Zinc, Aluminium ngefoyile ye coil, Hot-kwalenza Steel, IPpgi Ppgl,